PunctureSafe Maka Ahịa - Nchedo Taịa | Omogbọala Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»PunctureSafe Franchise maka ọrịre - Nchekwa Taịa zuru ezu
Nyefee Franchise Okike - Akwụ ụgwọ na ụgwọ
Nweta ngwugwu naanị iji chekwaa ikike nke nna ukwu maka obodo
From na-arụ ọrụ site n'isi ụlọ ọrụ UK dị na Exeter, anyị na-emepụta ma kesaa PunctureSafe nke bụ usoro ọgwụgwọ mgbochi mgbochi "na-adịgide adịgide" na taya ndụ extender / conditioner anyị kwenyere na ngwaahịa ahịhịa kachasị mma na gburugburu ebe obibi taa. A na-etinyere ya n’ime nkeji oge site na valve taya site na obere ikuku ikuku na-enweghị iwepu wiil ndị ahụ. Ejiri ya "mee ihe tupu ụta emee" yana akara akara na-adịgide adịgide "ka ha na-eme. Ọ bụ ngwaahịa EPC Friendly nke mmiri na - akpata mmiri bụ 100% anaghị egbu egbu yana 95% Organic.
Puncturesafe bụ ngwaahịa nke ọdịnihu na ọ bụ ya mere ihe karịrị mmadụ 120 na UK edebanyela aha maka mpaghara mpaghara n'ime afọ anọ gara aga, ndị na-erekwa iri puku azụmahịa na ndị mmadụ n'otu n'otu. Anyi nwere olile anya na n’oge oge a, na nkwado anyị, Onye Nwe ikikere nna ukwu ga-ewulite netwọko nke aka ha n'obodo ha dị ka otu anyị siri mee na UK. Businesskpụrụ azụmaahịa anyị nke UK enweela ihe ịga nke ọma n'ihi ọdịdị na ọdịdị nke ngwaahịa ahụ, tinyere ahịa maka PunctureSafe dị ebe niile, ọ bụ ebe niile.
Enwerekwa ohere ịbịakwute nnukwu ụlọ ọrụ na gọọmentị dị ka Minista Nchebe wdg. Anyị na-enye ọkwa dị ala maka oke ụlọ ọrụ maka ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere / na-anya ụgbọ ala site na narị ole na ole ruo iri puku. Ahịa nke ugbo, owuwu, ịkwụ ụgwọ osisi, ịkwatu ihe, mkpofu ahihia, ịhịa ahịhịa na ebe a na-egwu ala bụ nnukwu ụwa niile.
Anyị guzobere ugbu a na mba iri atọ n’ụwa niile.
Uru A Pụrụ Ime
Ọ bụrụ n’ịtọlite ​​ebe a na-etinye ihe nrụnye ma nyekwa ha kọọdụ iri abụọ nke ogo ọsọ ọsọ na mgbapụta nrụnye, ị ga-enweta ezigbo nloghachi ya na ntinye iwu.
Ọ bụrụ n’ị were ndị nke gị iji wụnye ọkwa dị elu ị ga-enweta n ’ụgwọ ụlọ ọrụ dị plọọkụ iri abụọ nke £ 20 opekata mpe (uru 1000%) ịwụnye n’ime ụgbọ ala eburu n’uzo wdg O were ihe na-erughị nkeji iri iji wụnye n’ime 900 taya na ụgbọ ala.
Ọ bụrụ na i nyefe ụlọ ọrụ (ndị ọrụ ugbo na wdg) batrị ụgbọ ala 20 dị obere, ị ga-enweta mbata nke 100% ruo 300%, dabere ma ị na-ebunye ya n'etiti 20% na XNUMX%, dabere ma ị na-ebunye ya naanị otu bọọlụ iri abụọ ma ọ bụ pallets dị iche iche.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ndị na - ekesa ụlọ ahịa kpebiri ịwụnye n'ime ụfọdụ nnukwu ụgbọ ala a, ọ dị mfe dịka ịwụnye n'ime ụgbọ ala, mana na ntinye aka dị elu na -eme ọrụ ahụ ugboro abụọ (nkeji 20).
Franchises Ọpụpụ UK dị
Na - ebugo naanị ngwugwu site na £ 1,500 ruo £ 3000 - enweghị franchise ma ọ bụ ego eze iji akwụ.
Ọzụzụ & Nkwado
Mgbe anyị nwetasịrị ikikere nke nna ukwu, anyị nwere ike inye nkwado zuru ezu iji mee ka ị bulie ma jiri obere nsogbu dịkarịa ala. Anyị nwere nka na ụzụ na azụmaahịa n'isi ụlọ ọrụ iji wepụrụ gị usoro dị mkpa na mmalite, si otú a mee ka ị nwee ike iji obi ike gaa n'ihu.
Njikwa Puncturesafe na ngalaba ọrụ aka nwere ike ịkwado gị na mbido, ma ka azụmaahịa gị na-etokwa ịmara ihe ị na-eme, yana otu esi eme ya, ọ na esite na ahụmịhe nke Puncturesafe ga-eji obi gị niile kerịta gị. Ọganiihu anyị na UK enyerela anyị nghọta zuru oke banyere ịdị mma, ọkachamara na afọ ojuju ọrụ ndị ahịa chọrọ site n’ahịa ahịa.
Ego ole ka ọ na-eri iji nweta ikike ndị ọzọ maka obodo?
Anyị na-enye "ngwongwo naanị" ngwugwu ikike ikikere nnapụta dị iche maka £ 15,000 ebe ị bụ naanị onye na-ekesa oke ahịa anyị n'obodo gị. Anyị anaghị akwụ ụgwọ maka ikike ikesa sealant anyị, a gaghị enwekwa ego eze ma ọ bụ ụgwọ iji gaa - ị ga-akwụ naanị maka ngwaahịa a.
Enweghị ihe ize ndụ maka itinye ego - enweghị ego njikwa ọ bụla
Choose nwere ike ịhọrọ iji wụnye, resị ndị na-akwọ ụgbọ mmiri, ma ọ bụ tọọ ntọala nwụnye
Ọnụ ego mmalite-ala dị ala
Okpukpo ukwu di ala ma na akwagide
Ala pụrụ iche
Ngwaahịa na-akpali akpali na-achọ
Dị ọcha, dị mfe, dị nfe ma dịkwa ngwa ịwụnye
Achọghi ihe omuma banyere taya ugbo ala
Achọghị ike anụ ahụ
Nwere ike ma ụmụ nwoke ma nwanyị nke ọ bụla gbara ajọ dimkpa
Ahịa dị egwu ebe niile na gburugburu gị
Ngwugwu zuru ezu iji banye n’ahịa site na otu ụbọchị
Enweghị ahụmịhe ọ dị mkpa - sistemụ Puncturesafe dị mfe ịmụta
Nwere ike ịbụ ụlọ ma ọ bụ ụgbọ ala dabere na ndị na-ekenye sub
Enwere ike ịme nkebi ma ọ bụ oge zuru oke maka ndị na-ekenye sub
Akụkọ ccessga nke Ọma Franchisee
William Upke, onye na-ekesa akwụkwọ Ọgọstụ 2019
Dịka franchisee ọhụụ, ejighi m n'aka na ihe m ga-atụ anya ga na puncturesafe, mana n'oge mmalite enyerela m nnukwu ọrụ n'aka Isi Office m ka m lekọta ya, nke a na-egosi puncturesafe na-agba mbọ inye ọrụ niile na franchisees koodu nzipu ozi nye obodo franchisor ha. N’ezie n’ime naanị izu ole na ole ijide mpaghara nzipu ozi m, Onye isi ụlọ ọrụ nyere m nkọwapụta nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ osisi chọrọ ịchọrọ ịzụta nrịba mmanụ ụgbọ mmiri x 30 x 20 maka £ 3690, nke m mere ngwa ngwa ma nweta ahịa ahụ, ya na Isi Office na-ezigara ndị ahịa mpempe ngwaahịa ngwaahịa ahụ n'otu ụbọchị.
Site na mmalite ahụ, nkwado ahụ adịla ebe ahụ. Akpọwo m ọtụtụ oku ekwentị mgbe m chọrọ enyemaka na usoro ntọala niile, ana m aga oku m na nyocha ọ bụla. Ejirila m nke ukwuu ma na-enye azịza oge niile. Knowingmara na inwetara nkwado sitere na otu ahụ na-eme ka m nwekwuo obi ike ịga n’ihu.
N'inwe ike nke azụmahịa na nkwado nke Puncturesafe, enwere m obi ụtọ ịhụ ihe ọdịnihu ga-eme.